“ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပေါင်းများစွာနဲ့ ပွဲထွက်ခဲ့တဲ့ Huawei ရဲ့ Kirin 980 Processor | MyTech Myanmar
“ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပေါင်းများစွာနဲ့ ပွဲထွက်ခဲ့တဲ့ Huawei ရဲ့ Kirin 980 Processor
စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းကို ပြောပါဆိုရင် “Processor (CPU+GPU)” ဆိုတာ အားလုံး သိပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါ။ ဒါ့ပေမယ့် ယနေ့ခေတ် အနေအထားနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကင်မရာ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စမတ်ဖုန်း အသစ်တစ်လုံးကို ဝယ်ယူတော့မယ့် လူတော်တော်များများက Processor ဘာသုံးထားလဲ ဆိုတာထက် ကင်မရာ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ၊ Megapixel ဘယ်လောက်ပါလဲ ဆိုတာကိုပဲ စိတ်ဝင်စားကြတာပါ။ အလားတူ စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ အများစုကလည်း ကင်မရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသာ အသားပေးပြီး ဈေးကွက်စီးပွားရေးကို ထိုးဖောက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ Practically အရ အရေးပါဆုံး အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်တဲ့ Processor ကိုတော့ မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ် လုပ်ထားလို့ မရပါဘူး။
Huawei အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် System-on-Chip (SoC) ဖြစ်တဲ့ Kirin 980 Processor ကို ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ Kirin 980 Processor အတွက် Huawei ရဲ့ HiSilicon က ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး Taiwan Semiconductor Manufacturer Company (TSMC) မှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ HiSilicon Kirin 980 Processor ဟာ ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပေါင်းများစွာနဲ့ နည်းပညာလောက အလယ်မှာ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ပွဲထွက်လာနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Kirin 980 Processor ဟာ ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး 7nm (nanometre) Architecture နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ SoC အမျိူးအစားဖြစ်ပြီး ARM ရဲ့ Cortex-A76 CPU နဲ့ Mali-G76 GPU တွေကို ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 1.4Gbps အထိ ရရှိနိုင်မယ့် Cat.21 Smartphone Modem ကို တပ်ဆင်ပေးထားသလို 2133MHz ရှိတဲ့ LPDDR4X RAM တွေ စိုက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Kirin 980 ဟာ Cat.21 Smartphone Modem ကို တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး Processor ဖြစ်သလို LPDDR4X (2133MHz) RAM တွေ စိုက်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက်လည်း ပထဦးဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ Processor ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Kirin 980 ရဲ့ Wi-Fi Speed က 1732Mbps အထိ ရှိတဲ့အတွက် “ကမ္ဘာ့ အမြန်ဆုံး စမတ်ဖုန်း Wi-Fi Speed” ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို လောလောဆယ်မှာတော့ Huawei က သိမ်းပိုက်ထားနိုင်မှာပါ။ Transistors စုစုပေါင်း ၆.၉ ဘီလီယံ (၆၉၀၀,၀၀၀,၀၀၀) အထိ ပါဝင်တဲ့ 1 Square centimetre အရွယ်အစားရှိ Kirin 980 ဟာ သူရဲ့ အရင်မျိူးဆက် ဖြစ်တဲ့ Kirin 970 (10 nanometre Architecture) ထက် Performance အပိုင်းမှာ ၂၀% အထိ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး Power Consumption အပိုင်းမှာလည်း ၄၀% အထိ လျော့ချပေးနိုင်တယ့် Processor ဖြစ်ပါတယ်။
Kirin 980 Processor ရဲ့ ကင်မရာ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်းကိုလည်း အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ ပြုလုပ်ထားပါသေးတယ်။ ကင်မရာ စွမ်းဆောင်ရည် အပိုင်းအတွက် Dual ISP လို့ခေါ်တဲ့ Image Signal Processor တွေကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် Kirin 970 နဲ့ ယှဉ်မယ်ဆိုရင် Kirin 980 ရဲ့ ကင်မရာ စွမ်းဆောင်ရည်က ၄၆% အထိ ပိုမိုမြန်ဆန်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယို ရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်း Power Consumption ကို ၂၃% အထိ လျော့ချနိုင်ပြီး Latency လည်း ၃၃% အထိ တိုးတက်လာတယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။ ဒါတင် မကသေးပါဘူး။ Artificial Intelligence (A.I.) အပိုင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် အလို့ငှာ Dual NPU(Neural Processor Unit) ကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် ဓာတ်ပုံပေါင်း ၄၅၀၀ ကို တစ်မိနစ်အတွင်း Recognize လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 845 Chip က ၂၃၇၁ ပုံကိုပဲ Recognize လုပ်နိုင်ပြီး Apple ရဲ့ A11 Chip ကတော့ ၁၄၅၈ ပုံကိုသာ Recognize လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Apple အနေနဲ့ လာမယ့် စက်တင်ဘာလထဲမှာ မျိူးဆက်သစ် iPhone တွေနဲ့အတူ A12 Chip ကိုပါ မိတ်ဆက်သွားနိုင်ပြီး Qualcomm ကလည်း Snapdragon 855 တွေကို မကြာခင်မှာ ပွဲထုတ်လာနိုင်ပါတယ်။ Samsung ကတော့ သူတို့ရဲ့ မျိူးဆက်သစ် Exynos Processor တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ခုချိန်ထိ ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေဆဲပါ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပြိုင်ဘက် Processor တွေ ပွဲထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ Huawei ရဲ့ Kirin 980 ဟာ စင်ပေါ်မှာဘဲ ဆက်ကနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
Ref: theverge, gadgets.ndtv,
“ကမ်ဘာ့ ပထမဦးဆုံး”ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဥျပေါငျးမြားစှာနဲ့ ပှဲထှကျခဲ့တဲ့ Huawei ရဲ့ Kirin 980 Processor
စမတျဖုနျး တဈလုံးရဲ့ အရေးကွီးဆုံး အစိတျအပိုငျးကို ပွောပါဆိုရငျ “Processor (CPU+GPU)” ဆိုတာ အားလုံး သိပွီးသား ဖွဈကွမှာပါ။ ဒါ့ပမေယျ့ ယနခေ့တျေ အနအေထားနဲ့ ပွောရမယျဆိုရငျတော့ ကငျမရာ ဖွဈကောငျး ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ စမတျဖုနျး အသဈတဈလုံးကို ဝယျယူတော့မယျ့ လူတျောတျောမြားမြားက Processor ဘာသုံးထားလဲ ဆိုတာထကျ ကငျမရာ ဘယျလောကျကောငျးလဲ၊ Megapixel ဘယျလောကျပါလဲ ဆိုတာကိုပဲ စိတျဝငျစားကွတာပါ။ အလားတူ စမတျဖုနျး ထုတျလုပျတဲ့ ကုမ်ပဏီ အမြားစုကလညျး ကငျမရာ စှမျးဆောငျရညျကိုသာ အသားပေးပွီး စြေးကှကျစီးပှားရေးကို ထိုးဖောကျကွတာ ဖွဈပါတယျ။ မညျသို့ပငျ ဆိုစကောမူ Practically အရ အရေးပါဆုံး အစိတျအပိုငျး ဖွဈတဲ့ Processor ကိုတော့ မကျြနှာလှဲ ခဲပဈ လုပျထားလို့ မရပါဘူး။
Huawei အနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ နောကျဆုံးထှကျ System-on-Chip (SoC) ဖွဈတဲ့ Kirin 980 Processor ကို ပွီးခဲ့တဲ့ သောကွာနကေ့ မိတျဆကျပေးခဲ့တာပါ။ Kirin 980 Processor အတှကျ Huawei ရဲ့ HiSilicon က ဒီဇိုငျးရေးဆှဲပေးထားတာ ဖွဈပွီး Taiwan Semiconductor Manufacturer Company (TSMC) မှာ ထုတျလုပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ HiSilicon Kirin 980 Processor ဟာ ကမ်ဘာ့ ပထမဦးဆုံး ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဥျပေါငျးမြားစှာနဲ့ နညျးပညာလောက အလယျမှာ ဂုဏျယူဝငျ့ကွှားစှာ ပှဲထှကျလာနိုငျခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
Kirin 980 Processor ဟာ ကမ်ဘာ့ ပထမဦးဆုံး 7nm (nanometre) Architecture နဲ့ တညျဆောကျထားတဲ့ SoC အမြိူးအစားဖွဈပွီး ARM ရဲ့ Cortex-A76 CPU နဲ့ Mali-G76 GPU တှကေို ပေါငျးစပျတညျဆောကျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ 1.4Gbps အထိ ရရှိနိုငျမယျ့ Cat.21 Smartphone Modem ကို တပျဆငျပေးထားသလို 2133MHz ရှိတဲ့ LPDDR4X RAM တှေ စိုကျနိုငျဖို့အတှကျလညျး ထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။ Kirin 980 ဟာ Cat.21 Smartphone Modem ကို တပျဆငျပေးထားတဲ့ ကမ်ဘာ့ ပထမဦးဆုံး Processor ဖွဈသလို LPDDR4X (2133MHz) RAM တှေ စိုကျသှငျးနိုငျဖို့အတှကျလညျး ပထဦးဆုံး ထောကျပံ့ပေးနိုငျတဲ့ Processor ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Kirin 980 ရဲ့ Wi-Fi Speed က 1732Mbps အထိ ရှိတဲ့အတှကျ “ကမ်ဘာ့ အမွနျဆုံး စမတျဖုနျး Wi-Fi Speed” ဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကို လောလောဆယျမှာတော့ Huawei က သိမျးပိုကျထားနိုငျမှာပါ။ Transistors စုစုပေါငျး ၆.၉ ဘီလီယံ (၆၉၀၀,၀၀၀,၀၀၀) အထိ ပါဝငျတဲ့ 1 Square centimetre အရှယျအစားရှိ Kirin 980 ဟာ သူရဲ့ အရငျမြိူးဆကျ ဖွဈတဲ့ Kirin 970 (10 nanometre Architecture) ထကျ Performance အပိုငျးမှာ ၂၀% အထိ ပိုမိုကောငျးမှနျလာပွီး Power Consumption အပိုငျးမှာလညျး ၄၀% အထိ လြော့ခပြေးနိုငျတယျ့ Processor ဖွဈပါတယျ။
Kirin 980 Processor ရဲ့ ကငျမရာ စှမျးဆောငျရညျအပိုငျးကိုလညျး အဆငျ့မွှငျ့တငျမှုမြား ပွုလုပျထားပါသေးတယျ။ ကငျမရာ စှမျးဆောငျရညျ အပိုငျးအတှကျ Dual ISP လို့ချေါတဲ့ Image Signal Processor တှကေို အသုံးပွုထားတာကွောငျ့ Kirin 970 နဲ့ ယှဥျမယျဆိုရငျ Kirin 980 ရဲ့ ကငျမရာ စှမျးဆောငျရညျက ၄၆% အထိ ပိုမိုမွနျဆနျလာတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဓာတျပုံ/ဗီဒီယို ရိုကျကူးနစေဥျအတှငျး Power Consumption ကို ၂၃% အထိ လြော့ခနြိုငျပွီး Latency လညျး ၃၃% အထိ တိုးတကျလာတယျလို့ ပွောကွားထားပါတယျ။ ဒါတငျ မကသေးပါဘူး။ Artificial Intelligence (A.I.) အပိုငျးကို ပိုမိုကောငျးမှနျလာစရေနျ အလို့ငှာ Dual NPU(Neural Processor Unit) ကို အသုံးပွုထားတာကွောငျ့ ဓာတျပုံပေါငျး ၄၅၀၀ ကို တဈမိနဈအတှငျး Recognize လုပျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 845 Chip က ၂၃၇၁ ပုံကိုပဲ Recognize လုပျနိုငျပွီး Apple ရဲ့ A11 Chip ကတော့ ၁၄၅၈ ပုံကိုသာ Recognize လုပျနိုငျပါတယျ။ Apple အနနေဲ့ လာမယျ့ စကျတငျဘာလထဲမှာ မြိူးဆကျသဈ iPhone တှနေဲ့အတူ A12 Chip ကိုပါ မိတျဆကျသှားနိုငျပွီး Qualcomm ကလညျး Snapdragon 855 တှကေို မကွာခငျမှာ ပှဲထုတျလာနိုငျပါတယျ။ Samsung ကတော့ သူတို့ရဲ့ မြိူးဆကျသဈ Exynos Processor တှနေဲ့ ပတျသတျပွီး ခုခြိနျထိ ရငေုံနှုတျပိတျ နဆေဲပါ။ ဘာဘဲဖွဈဖွဈ ပွိုငျဘကျ Processor တှေ ပှဲထှကျလာတဲ့အခြိနျမှာ Huawei ရဲ့ Kirin 980 ဟာ စငျပျေါမှာဘဲ ဆကျကနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
MyTech Myanmar2018-09-05T16:51:39+06:30September 5th, 2018|Huawei, Mobile Phones, News|